Yini ongayibona e-Soria nasezindaweni ezizungezile, kusukela ethempelini elikhulu kuya e-hermitage yaseSan Saturio | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona e-Soria nasezindaweni ezizungezile
Luis Martinez | 28/12/2021 13:36 | Spain amadolobha, Iziqondiso
Uma uzibuza ongakubona e-Soria nasezindaweni ezizungezile Ngoba uhlela ukuvakashela idolobha laseCastilian, kufanele wazi ukuthi linefa eliyisikhumbuzo elingavamile. Eqinisweni, kuyamangaza ukuthi idolobha elincane kangaka (abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amane) linengcebo enjalo yamagugu.
Ngokuqondene nalokhu, kusukela ezikhathini zamaRoma kuze kube manje, ngeNkathi Ephakathi, i-Renaissance, i-Baroque noma i-Neoclassicism. Ngakho-ke, ayilingani izinhlobonhlobo ezinkulu nengcebo eyisikhumbuzo. Ngaphezu kwalokho, i-Soria inezinhlobonhlobo zezindawo eziluhlaza. Futhi, uma lokhu kubonakala kukuncane kuwe, inendawo yemvelo emangalisayo futhi lapho izakhiwo zomlando ziningi khona. Kodwa, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa yonke into ongayibona e-Soria nasezindaweni ezizungezile.
1 Ongakubona e-Soria nasezindaweni ezizungezile, kusukela ezikhumbuzo zasemadolobheni kuya endaweni yemvelo
1.1 IMeya yasePlaza, into yokuqala ongayibona eSoria
1.2 ICo-Cathedral yaseSan Pedro
1.3 Amanye amasonto ongawabona eSoria
1.4 Soria udonga kanye castle
1.5 Izigodlo ezihloniphekile
1.6 Izindawo zokuhlala e- Soria
Ongakubona e-Soria nasezindaweni ezizungezile, kusukela ezikhumbuzo zasemadolobheni kuya endaweni yemvelo
Sizoqala umzila wethu odabula eSoria, izikhumbuzo zayo ezingaphazamisi lezo ze Segovia o Avila, enkabeni yedolobha laseCastilian. Khona-ke sizobe sesisondela ezindaweni nezikhumbuzo zezindawo ezingaphansi kwedolobha, nokho, ezimangalisa ngokulinganayo futhi ezizokuhlaba umxhwele. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa iminyuziyamu ethokozisayo ekunikeza yona.
IMeya yasePlaza, into yokuqala ongayibona eSoria
ISoria Main Square
Ukuze sifeze uhlelo lwethu, siqale uhambo lwase-Soria e-Plaza Mayor, isikhungo esiyiqiniso sedolobha. I-Porticed kanye ne- Umthombo Wamabhubesi Enkabeni yayo, eyakhiwa ngo-1798, inezikhumbuzo ezimbalwa, zona ngokwazo, ezithethelela ukuvakashela eSoria.
Kuyindaba ye- Isigodlo Sezethameli, ibhilidi le-neoclassical elihle nelipholile kusukela ekhulwini le-XNUMX namuhla elinesikhungo samasiko. Futhi kusukela ku- Indlu Yezizukulwane Eziyishumi Nambili, i-facade yayo ingeyesitayela se-post-Herrerian, kanye ne- Indlu Yezinto Ezijwayelekile, namuhla i-Municipal Archive. Ngokufanayo, ungabona ePlaza Mayor the I-Doña Urraca Palace, ifomu laso lamanje lisukela ekhulwini leshumi nesikhombisa, futhi kusukela Iholide laseDolobheni nendlu yayo enamathiselwe, kusukela ekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
ICo-Cathedral yaseSan Pedro
Nakuba igcina izinsalela zesonto lezindela zakudala kusukela ngekhulu le-XNUMX, lakhiwa ngekhulu le-XNUMX kulandela izinkolo zenkolo. isitayela se-platelesque. Inepulani yegumbi lokuphumula elinama-nave amathathu ahlukaniswe izingxenye ezinhlanu kanye nosilingi ophahleni omise okwenkanyezi. Ngaphakathi kwayo kunezindlu zokukhonzela eziningana kanye ne-altare eliyinhloko, umsebenzi we UFrancisco del Rio ekhulwini leshumi nesithupha. Mayelana nengaphandle, i Umnyango ongcwele nombhoshongo, nezinsimbi zawo eziwumbukwane.
Kodwa igugu elikhulu leCo-Cathedral yilo ikhandlela, yamenyezelwa njengesikhumbuzo sesizwe ngo-1929. Ingenwa ngomnyango onokhothamo oluyisiyingi futhi yakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Ezintathu zemibukiso yayo arched enezihloko ezimelela izilwane kumnandi, uhlaza kanye amavesi IBhayibheli. Kusukela ku-cloister, ungaphinda ufinyelele e-Refectory, okuhlala kuyo njengamanje Imyuziyamu yeDiocese.
Amanye amasonto ongawabona eSoria
Isonto laseSan Juan de Rabanera
Idolobha laseCastilian lake laba nezigodi ezingamashumi amathathu nanhlanu, kodwa amasonto alo amaningi anyamalele. Kodwa-ke, phakathi kwalezo ezigciniwe, kufanele sincoma ukuthi uvakashele ezintathu: iSan Juan de Rabanera, lokho kwe-Our Lady of Espino kanye neyaseSanto Domingo.
Eyokuqala ingeyeRomanesque engasekho futhi ibiyisikhumbuzo Sikazwelonke kusukela ngo-1929. Ngokwengxenye yayo, eyesibili inomfanekiso kasanta ongumvikeli wedolobha futhi yakhiwa ngekhulu le-XNUMX kulandela iCanon yasePlateresque ezinsaleni zelinye isonto lakudala. Ngokuqondene lowo oseSanto DomingoIphinde ibe yi-Romanesque, kodwa imvelaphi yayo enkulu kakhulu ihlala ku-façade yayo. Kunguziqu-zintathu ozungezwe ama-archivolts amane anezigcawu zebhayibheli eziqoshiwe futhi kunezinhlanu kuphela zalolu hlobo emhlabeni.
Njengoba sanitshela, akuwona neze kuphela amasonto angabonwa eSoria nasezindaweni eziyizungezile. Futhi sikweluleka ukuthi uvakashele abaseSan Nicolás, San Ginés, Santa María la Mayor noma San Miguel de Cabrejas.
Soria udonga kanye castle
Ukuqhubekela ekwakhiweni komphakathi kweSoria, sizoqale sikutshele ngakho udonga lwangenkathi ephakathi. Yakhiwa ngekhulu le-4100, yayiyisamba esingamamitha angu-XNUMX ubude futhi inesimo esine-quadrangular. Njengamanje, ingxenye enhle yayo igcinwe, nakuba ingeyona iminyango yayo. Kunalokho, kusekhona ama-shutter amabili noma iminyango emincane: lezo zaseSan Ginés naseSan Agustín.
Ngakolunye uhlangothi, lesi nqaba, esisengamanxiwa njengamanje, sasiyingxenye yodonga futhi kukholakala ukuthi sakhiwe ngezikhathi UFernand Gonzalez. Namuhla ungabona izinsalela ze-keep, indawo ebiyelwe yangaphakathi ebiyelwe kanye nokufinyelela kwayo, ephahlwe ngama-cubes amabili.
Ngakolunye uhlangothi, i- ibhuloho ledolobha eliphakathiKuyiqiniso ukuthi ibuyiselwe izikhathi eziningana. Yakhiwe ngamatshe, ikala amamitha ayikhulu neshumi nambili futhi inamakhothamo ayisishiyagalombili angama-semicircular. Sikweluleka ukuthi uyivakashele ebusuku, njengoba inokukhanya okuhle ebusuku.
Siphinde sincome ukuvakashela i- Ibhuloho likaCharles IV, kusukela ekhulwini le-XNUMX kanye insimbi, eyakhiwa ngo-1929 njengendawo yomzila wesitimela phakathi kweSoria neTorralba.
Isigodlo sama-Counts aseGómara
Ingxenye enhle yefa eliyisikhumbuzo ongabonwa e-Soria nendawo eyizungezile yakhiwe izigodlo ezinhle. Phakathi kwabo, ezimbili nazo zivelele: lokho kwezibalo zaseGómara kanye nekaLos Ríos noSalcedo.
Eyokuqala yazo yakhiwa ekupheleni kwekhulu le-2000 ngethonya elikhulu elivela kusitayela sama-Herrerian futhi ibilokhu iyinzuzo Yezamasiko kusukela ngo-XNUMX. Palace of the Rivers kanye Salcedo Yakhiwe wumndeni ofanayo owakha owedlule. Ingesitayela seRenaissance futhi njengamanje igcina Inqolobane Yomlando Yesifundazwe.
Kanye nalezi zindlu ezinhle, ungabona ezinye eziningi eSoria. Sizokugqamisa izigodlo zaseCastejones kanye noDon Diego de Solier, ezibumbene, kanjalo loMkhandlu wesiFundazwe, okuyi-neoclassical futhi ikunikeza isethi ethokozisayo yezithombe ezingaphambili.
Ngokwengxenye yalo, ukwakhiwa kwe- Numancia Ubungane Circle Kuyindawo enhle yekhulu le-XNUMX. Ngaphakathi, iHholo Lezibuko kanye Izimbongi Museum, enikezelwe kulabo abadlula eSoria futhi banikezela amavesi kuyo: UGustavo Adolfo Bécquer, u-Antonio Machado noGerardo Diego.
Izindawo zokuhlala e- Soria
IHermitage yeSan Saturio
Yize sishiye amatshe esikhumbuzo asazoqhubeka, manje sizokutshela ngendawo ezungezile enhle yedolobha laseCastilian kanye namagugu abanawo. Ngo ipaki yenqaba, etholakala lapho okukhona, unemibono engcono kakhulu yokubona i-Soria isuka endaweni yayo ephezulu kakhulu. Nokho, iphaphu eliluhlaza eliyinhloko ledolobha Ipaki ye-Alameda de Cervantes, lapho kunezinhlobo zezitshalo ezingaphezu kwekhulu namashumi amathathu.
Ungakwazi futhi ukuhamba nge- I-Paseo de San Polo futhi, ehlobo, ugeze e-Sotoplaya del Duero. Ukuthatha nje le ndlela uzofinyelela isizinda seSan Saturio, elinye lamathempeli anelukuluku lokufuna ukwazi edolobheni laseCastilian futhi elinikezelwe kumphathi walo. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX ochungechungeni lwemigede namakamelo abhotshulwe etsheni. Ngaphakathi kwayo kunemidwebo yaseBaroque futhi i-altare nayo ingeyalesi sitayela.
Ngakolunye uhlangothi, cishe amakhilomitha ayisishiyagalombili ukusuka edolobheni kukhona intaba Valosandero, okungenye yezindawo eziyintandokazi yabantu baseSorian abangahamba ngayo izintaba futhi bajabulele imvelo. Njengoba uhamba kwezinye zezindlela zakhona, uzokwazi ukubona imidwebo emigedeni kusukela kuNkathi Yebhulonzi.
Kepha, uma kunendawo okufanele uyibone endaweni ezungezile yaseSoria, lokhu kuyindawo yamanxiwa aseSoria. Numancia, abantu baseCeltiberia basendulo abamelana ngobuqhawe nokuvinjezelwa kwamasosha amaRoma baze bagcina ngokuzibulala bebonke. Ngokuqondile, itholakala eCerro de la Muela futhi inokuvuselelwa kwezindlu nezinye izakhiwo zangaleso sikhathi.
Isithasiselo esibalulekile kulokhu kuvakasha yilokhu INumantino Museum. Igcina izingcezu eziningi ezitholakala endaweni yedolobha lasendulo, kodwa futhi nezinye ezindala, ezePaleolithic kanye ne-Iron Age.
I-Hermitage yaseSan Bartolomé, emfuleni womfula iLobos
Ngakolunye uhlangothi, amanxiwa amakhulu e- Isigodlo saseSan Juan de Duero. Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX, sizoyifinyelela sidlula ibhuloho laseRoma. Njengamanje, amakhothamo amangalisayo e-cloister yayo, ehlotshiswe ngemidwebo, awagcinwanga kahle.
Ekugcineni, sikweluleka ukuthi uvakashele i- I-Lobos River canyon, ihlaba umxhwele nakakhulu kunendawo yangaphambilini futhi etholakala epaki yemvelo yegama elifanayo. Kulo, elivikelwe amagquma aphakeme, kukhona intaba Izindawo zokuhlala e- San Bartolomé, ukwakha isayithi eligcwele imfihlakalo. Yakhiwe engxenyeni yokuqala yekhulu le-XNUMX yi-Templars, ihlanganisa i-Romanesque ne-Gothic futhi yayiyingxenye yesigodlo sezindela esinyamalele manje.
Kulo lonke leli paki lemvelo, kunemibono eminingana ongayifinyelela ngezindlela zokuhamba izintaba ukuze uthole ukubukwa okuhle komhosha. Phakathi kwazo, ekaCostalago, ekaLastrilla kanye neyaseLa Galiana. Ungenza futhi uhambo lwebhayisikili ngisho nokugibela amahhashi.
Sengiphetha, sikubonise okuningi ngalokho ongakubona e-Soria nasezindaweni ezizungezile. Asinaso isikhala sokukhuluma ngazo zonke izimangaliso zedolobha laseCastilian nalezo ezilizungezile. Kodwa asimelani nokusho imiphakathi efana nawe I-Burgo de Osma, nesonto eliwumbukwane laseSanta María de la Asunción kanye neSibhedlela saseSan Agustín; IMedinaceli, ne-Plaza Mayor yayo emangalisayo, noma UVuesa, nefa lalo elibanzi lenkolo, eliseduze neLaguna Negra kanye ne-glacial cirques yaseSierra de Urbión. Akuwona yini umqondo omuhle ukuvakashela lezi zimangaliso?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Yini ongayibona e-Soria nasezindaweni ezizungezile
Yini ongayibona eMadrid ngosuku olulodwa